Barattoonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa hiriira mormii gaggeessaa oolan. - OMN
Barattoonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa hiriira mormii gaggeessaa oolan.
OMN:Oduu Sadaasa 15,2015 Godina Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa, rakkoo bulchiinsa gaarii fi, hanqinna tajaajila hawaasummaan wal qabatee, hiriira mormii geggeessaa ooluu isaanii himame.
Miniyaapolisitti mariin Master pilaanii Finfinnee irratti taasifame ejjannoo dabarfachuun xumurame.
Kamisee fi naannawaashiitti jiraattonni beelaan daran miidhamaa jiru.
OMN: በሀላባ ዞን የተካሄደ የሠላም ኮንፈረንስ(June 19/2019)
OMN: Oduu (Wax 19, 2019)
OMN: Oduu Guyyaa Waxabajjii 19, 2019
OMN: oomisha Keessaniif Waxabajji 18,2019
በአማራ ክልል ከኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳዳሪ ከአቶ አህመድ ሀሰን ጋር በስልክ የተደረገ ቃለመጠይቅ
Oromia Media Jun 20, 2019